Jawaabta Xil-ka-Qaadisteyda! Ex Wasiir Yuusuf Garaad. | WAJAALE NEWS
Jawaabta Xil-ka-Qaadisteyda! Ex Wasiir Yuusuf Garaad.
January 4, 2018 - Written by Editor:
“Haddii Aad Qormadan u Akhrineyso in Aad ka Hesho war Dowladda ama Madaxda Qaranka Dhaawaca fadlan Halkan ku Jooji”.
QALINKII Ex Wasiir Yuusuf Garaad Cumar